Wasiir Cawad oo ka hadlay kulanka Farmaajo iyo Kenyata • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wasiir Cawad oo ka hadlay kulanka Farmaajo iyo Kenyata
Wasiir Cawad oo ka hadlay kulanka Farmaajo iyo Kenyata
September 26, 2019 - By: Ayub Ali
Madaxweynaha Somalia M. Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyata ayaa ku kulmay magaalada New York oo ah goobta uu ka socdo shirka Golaha Guud ee QM. Kulankan ayaa waxa fududeeyey madaxweynaha Masar Cabdifataax Asiisi oo hadda haya xilka Guddoomiyaha Midowga Afrika.
Kulankan dhex-dhexaadinta ah ayaa qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa wada-hadal lagu dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal, taasoo dad badan u fasirteen in dowladda Soomaaliya aqbashay in laga wada -hadalo muranka badda ee labada dowladood u dhaxeeya.
Balse Wasiir Cawad oo la hadlay Idaacada VOA ayaa yiri ”Madaxweye Farmaaajo kulanka ka hor ayuu u sii sheegay madaxweynaha dalka Masar oo kulanka dhaxdhaxaadinayay in aan marnaba laga wada hadli karin qadiyada ku saabsan Badda loona daayo go’aan ka gaaristeeda Maxkamad ICJ oo ay hadda dacwaddu hortaalo”
Cawad ayaa cadeeyay in dalabka kulankan uusan ka imaan dowladda Soomaaliya balse ay Kenya codsatay.
” Dabcan madaxweynaha Masar ayaa nagu soo war-galiyay in madaxda Kenya ee ku sugan shirka doonayaan in ay nala hadlaan., sidaa ayuuna ku aqblay madaxweyne Farmaajo madaama aysan waxba ku jabneyn in la wada hadlo” ayuu yiri Cawad.
Sawirada kulanka madaxda oo ay baahisay Villa Soomaaliya ayaa muran badan waxay ka dhex-galisay gudaha bulshada Soomaaliyeed, iyadoo dood xoogan laysu waydaarsaday baraha bulshada.